Ukunika iiSantiitizers ngokubhekiselele kwiSwaphu kunye namanzi
I-anti-bacterial hand sanitizers zithengiswa kuluntu njengendlela efanelekileyo yokuhlamba izandla xa isepha yomdaka kunye namanzi engekho. Le mveliso "engenamanzi" ithandwa kakhulu ngabazali bezingane ezincinci. Abavelisi bezonyango zangasese bathi ama-sanitizers abulala ama-99.9 ekhulwini eentsholongwane. Ekubeni ngokuqhelekileyo usebenzisa ama-sanitizers esandla ukuhlambulula izandla zakho, ukucinga ukuba iipesenti ezingama-99.9 zeentsholongwane eziyingozi zibulawa yi-sanitizers.
Ucwaningo lophando lubonisa ukuba oku akunjalo.
Sisebenza njani ngeSantiitizers?
Izicathulo zesohlwayo zisebenza ngokukhupha ngaphandle kwendawo yeoli kwesikhumba . Oku kuvame ukuvimbela amabhaktheriya avela emzimbeni ukuba angene emkhatsini wesandla. Nangona kunjalo, ezi bhaktheriya eziqhelekileyo ezikhoyo emzimbeni ngokuqhelekileyo aziyizona iintlobo zeebhaktheriya eziya kusenza sigule. Kuhlalutyo lophando, uBarbara Almanza, uprofesa onxulumene neYunivesithi yasePurdue ofundisa iindlela ezikhuselekileyo zokucoceka kubasebenzi, wafika kwisigqibo esithandekayo. Uphawula ukuba uphando lubonisa ukuba i-sanitizers yezixhobo ayinciphisi ngokukhawuleza inani leebhaktheriya esandleni kwaye kwezinye iimeko zinokunyusa inani leebhaktheriya. Ngoko umbuzo uvela, njani abavelisi bangenza i-99.9 yepesenti ibango?
Abavelisi Benza njani i-99.9 Ipesenti zebango?
Abavelisi beemveliso bavavanya iimveliso kwiindawo ezingaphilileyo ezinobungozi , ngoko ke banako ukufumana amabango angama-99.9 ekhulwini amabhaktheriya abulawe.
Ukuba iimveliso zavavanywa ngokupheleleyo kwizandla, akukho mbuzo uza kuba nemiphumo eyahlukileyo. Ekubeni kunobunzima obunzima kwisandla somntu, ukuvavanya izandla kuya kuba nzima nakakhulu. Ukusebenzisa indawo kunye neziguquko ezilawulwayo yindlela elula yokufumana uhlobo oluthile lokuhambelana kweziphumo.
Kodwa, njengokuba sonke siyazi, ubomi bemihla ngemihla aluhambisani.
Isandla seSanitizer ngokuSondeza isandla kunye namanzi
Okuthakazelisayo ngokwaneleyo, UkuPhathwa kweeNkozo kunye noTywala, ngokubhekiselele kwimimiselo ephathelele iinkqubo ezifanelekileyo zokunikwa kweenkonzo zokutya, uncoma ukuba izithambiso zesandla zingasetyenziselwa indawo yesepha kunye namanzi kodwa nje kuphela. Ngokufanayo, u-Almanza uncoma ukuba ukuhlambulula kakuhle izandla, isepha kunye namanzi kufuneka kusetyenziswe ngexesha lokuhlamba izandla. Isalathisi sesandla asikwazi kwaye akufanele sithathe indawo yokucoca okufanelekileyo kunye nesepha kunye namanzi.
Izixhobo zokuncedisa i-saniti ziyakwenza enye indlela efanelekileyo xa ukhetho lokusebenzisa isepha kunye namanzi alufumaneki. I-sanitizer e-alcohol-based based containing containing least 60% utywala kufuneka isetyenziswe ukuqinisekisa ukuba iintsholongwane zibulawa. Ekubeni i-sanitizers ezandleni zithintela ukungcola kunye namafutha ezandleni, kulungile ukuba usule izandla zakho ngetayili okanye nge-napkin ngaphambi kokuba ufake isicelo senkunkuma.
Kuthiwani NgeSpresbatterial Sens?
Uphando malunga nokusetyenziswa kwabaphululi be-antibacterial lisibonise ukuba iisepha ezicacileyo zisebenza ngokufanayo njengesepha ye-antibacterial ekunciphiseni izifo ezinxulumene nezifo . Enyanisweni, ukusebenzisa umthengi ngemveliso ye-sopha yesininzi kunokunyusa ukuxhatshazwa kwamagciwane kuma- antibiotics kwezinye iibhaktheriya.
Ezi zigqibo zisebenza kuphela kumthengi we-antibacterial soaps not to those used in hospitals okanye kwezinye iiklinikhi. Ezinye iingcaphephe zibonisa ukuba indawo ezicocekileyo ezichanekileyo kunye nokusetyenziswa okuqhubekayo kweesabatha zesifo se-antibacterial kunye ne-sanitizers zonyango zingavimbela ukuphuhliswa kolawulo lwe- immune olufanelekileyo kubantwana. Oku kungenxa yokuba iinkqubo zokuvuvukala zifuna ukugqithiswa okukhulu kwiintsholongwane eziqhelekileyo zophuhliso olufanelekileyo.
NgoSeptemba 2016, i-US Food Administration and Drug Administration ivimbele ukuthengiswa kwemveliso ye-antibacterial engaphezulu kwe-counter equkethe izithako ezininzi kuquka i-triclosan kunye ne-triclocarban. I-Triclosan kwiisepha zokulwa ne-antibacterial kunye nezinye iimveliso ziye zadibaniswa nophuhliso lwezifo ezithile.
Oku ngakumbi kwiSantijizer Hand Hand vs. vs. Soap and Water
Ukunikezela ngeSantiitizers Akukho Nxalenye yeSepha kunye namanzi - IiNdaba zoPhulo
Izizathu Ezilishumi Ezinhlanu Zokuhlamba Izandla Zakho
ZeMpawu zoTshintsho lweMichiza
Qonda i-Spectrum ebonakalayo (iWavelengths kunye nemibala)
Indlela yokwenza iSitishi seMozulu seMozulu ekhaya
Imithetho kaKirchhoff yeeNje kunye neGesi
Yintoni i-Metal Metal? Inkcazo kunye nemizekelo
I-Acid Base Titration Inkcazo
Ukuqonda Amagama Ayingxaki Yebhaloji
Kutheni Kuthatyathwa Imimoya Ehlabathini Elingaphezu Kwezilwandle?
UIshmayeli - uNyana woNyana ka-Abraham
I-Dinosaurs kunye Nezilwanyana Zokuqala ZaseVermont
I-Dinoseurs e-Smartest ye-10
Iingongoma ziphendule kwii-9/11 zokuhlaselwa
Nceda! I-Car Car Key ayiyi kujika
Salem College Admissions
Ukuchaza 'ikhamera' kwiiClubs zeGalfu
Ixesha le-Victorian laliyixesha lokutshintsha
I-Atomic Model kaJohn Dalton
I-Octane Number Inkcazo kunye neMzekelo
Iingcebiso zoLawulo lokuziphatha
IsiFrentshi esiBambeneyo - Le subjonctif
ITire yokuSula: Yintoni iHeck yiSipe?
ISt. Joseph College yaseNew York Admissions
Iifom zeMama ezimfutshane zee-imeyili okanye amakhadi
Udwebo oluchanekileyo nolungachangaleleyo
Iingoma zeKrismesi Iingoma kunye neengoma
Izikhokelo zeeDayibrari zeDovibatory
Umehluko phakathi kobunikazi bezoLawulo kunye noLawulo
Izixhobo zokwenza amaHlathi eziPhambili
Konke Okufuneka Ukwazi NgeTelekinesis
Isikhokelo soMqala kwiiNkcukacha zoQoqosho
I-Bone Apple Tea! 18 "Gore-Meyi" Ukupheka Abangamazi Indlela Yokuphala
Iindlela zokusetyenziswa kweHrobicide Izindlela